July 8, 2020 970
त्यस्तै उनको उक्त बयान आयपछि कलाकार देखि अन्य क्षेत्रका मानिसहरूले समेत उनको चर्को आलोचना गरेका छन् । त्यस्तै मा विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले समेत दीपाश्रीको आलोचना गरेकाछन् ।
हेरौ उक्त भिडियो….
Nextभोली असार २५ गते बिहीबार को राशिफल हेर्नुहोस्…
आज अमेरिकी डलर सहित अन्य देशको मुद्राको भाउ बढ्यो की घट्यो ? हेर्नुहोस्
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (134668)